Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 7:1-40
Afotu a ɔde maa wɔn a wɔaware ne wɔn a wɔnwaree (1-16)
Sɛnea na obiara te a wɔfrɛɛ no no, ɔntena mu saa ara (17-24)
Wɔn a wɔnwaree ne akunafo (25-40)
Sigyadi so mfaso (32-35)
Ware wɔ “Awurade mu nko ara” (39)
7 Afei krataa a mokyerɛw brɛɛ me no, nea mewɔ ka wɔ ho ni: Eye ma ɔbarima sɛ ɔremfa ne ho nka ɔbea;* 2 nanso esiane sɛ aguamammɔ* abu so nti, ɔbarima biara nnya ɔno ara ne yere,+ na ɔbea biara nso nnya ɔno ara ne kunu.+ 3 Okunu mma ne yere nea ɛsɛ no,* na ɔyere nso nyɛ saa ara mma ne kunu.+ 4 Ɔyere nni ɔno ara ne nipadua so tumi, na mmom ne kunu na ɔwɔ so tumi; saa ara nso na okunu nni ɔno ara ne nipadua so tumi, na mmom ne yere na ɔwɔ so tumi. 5 Ɛnsɛ sɛ okunu ka sɛ ɔne ne yere renna, na ɛnsɛ sɛ ɔyere nso ka sɛ ɔne ne kunu renna, gye sɛ mo baanu nyinaa pene so sɛ morenna kosi bere bi, na moanya bere ama mpaebɔ na moasan abehyiam bio, na Satan ankɔ so ansɔ mo anhwɛ esiane ahohyɛso* a moannya nti. 6 Nea mereka yi, mubetumi ayɛ no saa, nanso ɛnyɛ ɔhyɛ. 7 Minyae a, anka nnipa nyinaa te sɛ nea mete yi. Nanso, obiara wɔ ɔno ara n’akyɛde+ a efi Onyankopɔn hɔ. Oyi de yɛ sɛɛ, ɛnna obi nso de yɛ sɛɛ. 8 Afei meka kyerɛ wɔn a wɔnwaree ne akunafo sɛ, eye ma wɔn sɛ wɔbɛtena hɔ sɛnea mete yi.+ 9 Nanso sɛ wontumi nhyɛ wɔn ho so a, ma wɔnware, efisɛ eye sɛ wɔbɛware sen sɛ nna ho akɔnnɔ bɛhyɛ wɔn so.+ 10 Awarefo no de, mema wɔn ahyɛde. Ɛnyɛ me na mede ahyɛde no rema, na mmom Awurade. Ɛne sɛ, ɛnsɛ sɛ ɔyere ne ne kunu tetew mu.+ 11 Nanso sɛ ɔne no tetew mu a, ɛnsɛ sɛ ɔware. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔware a, ɛnde ɛsɛ sɛ ɔsan ne ne kunu no kɔbom; na okunu nso, ɛnsɛ sɛ ogyaa ne yere.+ 12 Na wɔn a aka no de, nea mewɔ ka kyerɛ wɔn ni. Ɛnyɛ Awurade, na mmom me na mereka.+ Ɛne sɛ: Sɛ onuabarima bi wɔ yere a onnye nni, na sɛ ɔbea no pene so sɛ ɔne no bɛtena a, ɛnsɛ sɛ ogyaa no; 13 na sɛ ɔbea bi nso wɔ kunu a onnye nni, na sɛ ɔbarima no pene so sɛ ɔne no bɛtena a, ɛnsɛ sɛ ogyaa ne kunu no. 14 Efisɛ okunu a onnye nni no ho tew, ne yere no nti; na ɔyere a onnye nni no ho tew, onuabarima no nti. Sɛ ɛnte saa a, anka mo mma ho agu fĩ, nanso seesei wɔyɛ kronkron. 15 Na sɛ nea onnye nni no ka sɛ ɔrekɔ* a, ma ɔnkɔ; sɛ ɛba saa a, biribiara nkyekyere onuabarima anaa onuabea no, na asomdwoe mu na Onyankopɔn afrɛ mo aba.+ 16 Na ɔyere, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ ɛnyɛ wo na wubegye wo kunu nkwa?+ Anaa okunu, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ ɛnyɛ wo na wubegye wo yere nkwa? 17 Ne nyinaa mu no, sɛnea Yehowa* ama obiara ne kyɛfa no, saa ara na obiara mmɔ ne bra, sɛnea Onyankopɔn afrɛ no no.+ Akwankyerɛ a mede ama wɔ asafo ahorow nyinaa mu ne no. 18 Wɔfrɛɛ obi bere a watwa twetia* anaa?+ Ɛnsɛ sɛ ɔdan obi a ontwaa twetia. Wɔfrɛɛ obi bere a ontwaa twetia anaa? Ɛnsɛ sɛ otwa twetia.+ 19 Twetiatwa nkyerɛ hwee, na wontwaa obi twetia nso a, ɛnkyerɛ hwee.+ Nea ehia ne sɛ obedi Onyankopɔn ahyɛde so.+ 20 Sɛnea na obiara te a wɔfrɛɛ no no, ɔntena mu saa ara.+ 21 Bere a wɔfrɛɛ wo no, na woyɛ akoa anaa? Mma ɛnnhaw wo;+ nanso sɛ wubetumi afi nkoasom mu a, ɛnde fi mu. 22 Na obiara a wɔfrɛɛ no Awurade mu bere a ɔyɛ akoa no, wabɛyɛ Awurade nipa a wɔayi no afi nkoasom mu.+ Saa ara na nea wɔfrɛɛ no bere a onni nkoasom mu no nso, wabɛyɛ Kristo akoa. 23 Wɔtɔɔ mo aboɔden;+ munnyae sɛ moyɛ nkoa ma nnipa. 24 Anuanom, sɛnea na obiara te a wɔfrɛɛ no no, ɔntena mu saa ara wɔ Onyankopɔn anim. 25 Afei ɛdefa mmaabun* ho de, minni ahyɛde biara a efi Awurade hɔ, na mmom mereka m’adwene+ sɛ obi a Awurade huu no mmɔbɔ sɛ ɔmmɛyɛ ɔnokwafo. 26 Enti misusuw sɛ ɔhaw a yɛwɔ mu seesei nti, sɛnea onipa te biara, eye sɛ ɔtena hɔ saa ara. 27 Wobata ɔyere ho anaa? Gyae sɛ woretetew wo ho.+ Wunni yere anaa? Gyae sɛ worehwehwɛ ɔyere. 28 Nanso sɛ woware nso a, wonyɛɛ bɔne. Sɛ ɔbaabun ware a, ɔnyɛɛ bɔne. Nanso wɔn a wɔware no ho bɛyeraw* wɔn ɔhonam mu. Me de, mempɛ sɛ mo ho bɛyeraw mo. 29 Bio nso anuanom, nea mereka ne sɛ, bere a aka no sua.+ Efi saa bere yi rekɔ no, momma wɔn a wɔwɔ yere no nyɛ sɛ nea wonni bi, 30 na wɔn a wosu nyɛ sɛ wɔn a wonsu, na wɔn a wodi ahurusi nyɛ sɛ wɔn a wonni ahurusi, na wɔn a wɔtɔ nyɛ sɛ wɔn a wonni bi. 31 Wɔn a wɔde wiase di dwuma nso, wɔmmma wiase nnnye wɔn adwene; efisɛ sɛnea wiase te no resesa. 32 Me de, mempɛ sɛ dadwen hyɛ mo so. Ɔbarima a ɔnwaree no, ɔda dwen Awurade nneɛma ho, sɛnea ɔbɛsɔ Awurade ani. 33 Na ɔbarima warefo de, ɔda dwen wiase nneɛma ho,+ sɛnea ɔbɛsɔ ne yere ani; 34 ne mu akyɛ. Bio nso, ɔbea a ɔnwaree, ne ɔbaabun da dwen Awurade nneɛma ho,+ sɛnea ɔbɛyɛ kronn ne nipadua mu ne ne honhom mu. Na ɔbea warefo de, ɔda dwen wiase nneɛma ho, sɛnea ɔbɛsɔ ne kunu ani. 35 Mo ara mo yiye mu nti na mereka eyi; ɛnyɛ sɛ mede biribi rekyekyere mo, na mmom sɛnea ɛbɛma moayɛ nea ɛfata na moatumi asom Awurade daa a biribiara nnye mo adwene. 36 Nanso sɛ obi hu sɛ ware a ɔnwaree* no ama ɔreyɛ nea ɛmfata, na sɛ onii no nyɛ abofra bio a, ɛnde nea ɛsɛ sɛ ɛba ni: Ma ɔnyɛ nea ɔpɛ; ɔnyɛɛ bɔne. Ma wɔnware.+ 37 Na sɛ obi asi gyinae wɔ ne koma mu, na hwee nhyɛ no so, na mmom otumi hyɛ n’ankasa akɔnnɔ so, na wasi gyinae wɔ ɔno ara ne koma mu sɛ ɔrenware* a, ebesi no yiye.+ 38 Saa ara na obiara a ɔbɛware* no, ɔno nso ebesi no yiye. Nanso nea ɔnware no, ebesi no yiye asen nea ɔware.+ 39 Bere tenten a ɔbea kunu te ase no, mmara akyekyere no afam ne kunu ho.+ Na sɛ ne kunu wu* a, wade ne ho; otumi ware obiara a ɔpɛ, mmom Awurade mu nko ara na ɔnware.+ 40 Nanso m’adwene ne sɛ, sɛ ɔtena hɔ sɛnea ɔte no a, n’ani begye kɛse. Migye di sɛ me nso mewɔ Onyankopɔn honhom.
^ Kyerɛ sɛ, ɔne ɔbea renna.
^ Anaa “ɔretetew mu.”
^ Anaa “wɔn a wɔnwaree da.”
^ Anaa “behiahia.”
^ Anaa “ne baabunyɛ.”
^ Anaa “ɔbɛtena ne baabunyɛ mu.”
^ Anaa “ɔde ne baabunyɛ bɛma wɔ aware mu.”
^ Nt., “ne kunu da.”